Xog: Wasiirka ka tirsan Dowladda Somalia oo lagu eedeeyay inuu Guri Shacab xoog ku haysto. – Hornafrik Media Network
Xog: Wasiirka ka tirsan Dowladda Somalia oo lagu eedeeyay inuu Guri Shacab xoog ku haysto.
Wasiirka Amniga Gudaha Somalia, Maxamad Ducaale Isloow ayaa lagu eedeeyay inuu xoog ku haysto Guri ay leeyihiin Dad Shacab ah Magaaladda Muqdisho, Isla markaana uu awood ku hor istaagay Amar ay bixisay Maxkamadda Gobalka Banaadir oo ahaa inuu Bixiyo Lacago Kiro ah oo ku waajibay, Wareejiyana Milkiyadda Gurigaasi.
Wasiirka Amniga waxa uu Gurigan kiraystay Sannadkii 2011-ka, isagoo heshiis la saxiixday Dadka iska leh Guriga, Waxaana uu bixin jiray Kiro, Balse November 2014-kii ayuu gabi ahaanba joojiyay Kiradii uu bixin jiray, isagoo Qoyskii lahaa Gurigana Taleefoonadda ka qaban waayay, Waaxana Qoyska Guriga leh ay kadib u dacwoodeen Maxkamadda Gobalka Banaadir oo soo saartay Amar ah in Wasiirku iska bixiyo Kiradda Guriga ee lagu yeeshay, isla markaana ku wareejiyo Guriga Dadkii lahaa.
Wasiirka Amniga oo Sharciyan amar kasta oo Fulin raba ee ay soo saarto Maxkamaddu la marsiiyo Xafiiskiisa, si uu u faro Laamaha Amniga inay fuliyaan Amarkaasi ayaa Waraaqihii isaga ka dhanka ahaa ee ay Garsoorku soo saareen isaga tuuray meel, isagoona dhagaha ka furaystay inuu fuliyo Amar Maxkamadeed.
Guriga Beel oo ah Guriga uu Wasiir Isloow ka haysto Dadkii lahaa waxay Maxkamadda Gobalka Banaadir xukuntay inuu bixiyo Nus Malyuun Doolar oo ah Kiro lagu yeeshay, taasoo ah Kiradda inta u dhaxaysay November 2014-ka illaa iyo August 2017-ka. Waxaana Xukunkaasi Maxkamadeed ku saxiixnaa Gudoomiyaha Maxkamadda Gobalka Banaadir, Aways Sh C/laahi.
Hayada (IRG) international Resources Group oo ah hayada Guriga dagan oo Warqad Cabasho ah la gaarsiiyay waxay sheegatay in Guriga ay ku dagan tahay Sifo Sharci ah oo uu ka kireeyay Wasiirka Amniga, Isloow, isla markaana ay bil walba bixiyaan Kiradda ku waajibtay.
Dowladda Somalia oo horay u iclaamisay inay cirib tiri doonto Musuqmaasuqa, iyo awood sheegashadda ayaa looga fadhiyaa inay wax ka qabato Wasiirka Amniga oo dhagaha ka furaystay Cabashadda Dadka leh Guriga iyo Amarka Maxkamadda Gobalka Banaadir. Waxaana Wasiirka oo sidoo kale ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka uu Xasaanadiisa uga faaiidaysanayaa inuu Guri Shacab ku haysto Awood, sida ay ku doodayaan Dadka leh Milkiyadda Gurigaasi.
“Waxaan ka codsanaynaa Xafiisyadda ugu sareeya Dawladda Somalia inay soo faragaliyaan arrintan, lana fuliyo Amarka Maxkamadeed, Waxaan codsanaynaa in la tixgaliyo Cadaaladda, hantideenana na looga qaado Wasiirka Amniga oo Cadaaladii ay ahayd inuu isagu illaaliyo laftigiisii ku tumanayo,” Sidaana waxaa yiri mid ka mida Qoyska Gurigaasi leh oo la hadlayay Hornafrik.
Waa Markii ugu horaysay ee Wasiir ka tirsan Xukuumadda Somalia ee uu hogaamiyo Raiisul Wasaare, Xasan Cali Khayre ay ku soo baxdo Fadeexad noocan ah.